Cabdikariin Xuseen Guuleed oo u jawaabay Wasiirka Amniga | Dhacdo
Home Wararka Maanta Cabdikariin Xuseen Guuleed oo u jawaabay Wasiirka Amniga
Cabdikariin Xuseen Guuleed oo u jawaabay Wasiirka Amniga
Musharax Madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ka jawaabay warkii shalay ka soo yeeray Wasiirka Amniga, Xasan Xundubey Jimcaale ee ku aaddanaa inaanan wax bannaanbax ahi lagu qaban karin Magaalada Muqdisho.
Wasiirka ayaa sheegay in la joojiyay nooc kasta oo bannaanbax ah, ha noqdo mid lagu taageerayo Dowladda Federaalka amaba looga soo horjeedo, xilli Midowga Musharaxiinta ay iclaamiyeen in bannaanbax kale ay Jimcaha soo socda ka dhigi doonaan Magaalada Muqdisho.
“Sideedaba bannaanbax dowladda waa soo saari kartaa, dadka mucaaradkana waa soo saari karaan, wax weyn maaha in dowladda soo saarto ama mucaaradka, laakiin kulligood waa sharci-darro ama dowladda halagu taageero ama halooga soo horjeedo, bannaanbax oo dhan waa sharci-darro.” Ayuu yiri Wasiirka oo sababta ku sheegay in dalka uu wajahayo xaalad adag oo ka dhalatay faafitaanka COVID-19 iyo mid amni oo jirta.
Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka mid ah Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay in xaq dastuuriya ay u leeyihiin inay aragtidooda iyo ra’yigooda ku muujiyaan bannaanbaxaasi.
Cabdikariin Xuseen ayaa tilmaamay in uu sidiisii yahay go’aankoodii ay Isniintii ku iclaamiyeen bannaanbaxa ay maalinta Jimcaha ku qabanayaan Caasimadda Muqdisho.
Guuleed ayaa waxa uu BBC u sheegay in ay ka go’an tahay in 26-ka bishan ay isu soo bax ka dhiggaan Taalada Daljirka Dahsoon, xilli Jimcihii la soo dhaafay laga hor istaagay.
Midowga Musharaxiinta ayaa waxaa suurtagal ah in war ay ku mideysan yihiin ka soo saaraan awaamiirta Dowladda Federaalka ku joojisay bannaanbaxyada.
Previous articleXaaladihii ugu dambeeyay COVID-19 ee dalka laga diiwaangeliyay
Next articlePuntland oo dalbatay in xilalka laga qaado Taliye-yaasha Ciidamada Dowladda